Kafee waa mid ka mid ah saddexda cabitaan ee ugu waaweyn adduunka. Waa cabitaan laga sameeyay digirta kafee ah. Waa cabitaanka ugu caansan adduunka oo ay weheliso kookaha iyo shaaha. Iyadoo kor loo qaadayo heerarka nolosha dadkeenna iyo koritaanka joogtada ah ee ka warqabka dhaqanka kafeega. ...
Subaxnimadii Noofambar 24, 2020 Shirka Sannadlaha ah ee Ururka Warshadaha Cuntada iyo Baakadaha Mashiinka Shiinaha iyo Shirka 9aad ee Qalabka Cuntada Aasiya ayaa ka furmay Shanghai. In ka badan 300 oo ah shirkadaha qalabka cuntada, in ka badan 100 shirkadood oo safka koowaad ah, iyo in ka badan 500 oo wakiillo ayaa ka qaybgalay ...
1. Dulmarka guud iyo kala soocida warshadaha khadku waa walax dareere ah oo leh walxo midab leh oo si isku mid ah ugu firidhsan dhajiska isla markaana leh wax u gaar ah. Waa shey lagama maarmaan u ah daabacaadda. Baaqii maanta ee horumarinta dhaqaalaha kaarboon-hoose iyo kobcinta saliidda ...
Calaamadaha macaamiisha adduunka sida Pepsi, Coca-Cola, iyo Unilever waxay sameeyeen ballanqaadyo baaxad weyn oo waaraya. Aynu eegno, waa maxay horumarkii ugu dambeeyay ee baakadaha ee noocyadan? Pepsi-Cola Europe: Ku beddel dhammaan dhalooyinka caagga ah ee dib loo rogay ee 2022 Pepsi-Cola Europe, taas oo ...
INTPAK 2020 Shanghai Exhibition Warshadaha Carwada ayaa kugula kulmi doonta Hoolka Carwada Carwada Adduunka ee Shanghai Ogosto 12-14
Qabashada guuleysiga ah ee Bandhigga Warshadaha Baakadaha Caalamiga ah ee INTPAK 2019 oo hal-ku-dhiggeedu yahay "Warshadaha Baakadaha, Wisdom ayaa ku guuleysta Mustaqbalka" waxay sii socotaa dhalaalka in ka badan toban bandhigyo hore ee warshadaha baakadaha ah, iyagoo noqonaya kuwa ugu horreeya ee warshadaha baakadaha soo bandhiga ...
Nidaamyada ogaanshaha birta waxaa markii ugu horreysay laga soo saaray Ingiriiska 1948, haddana waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha baakadaha cuntada. Sumcadda sumcaddaadu waa wax kasta oo adduunkan ku xidhan ee aadka u xeel dheer, wax soo saarkiisuna ka buuxo. Maalgashi lagu sameeyo qalabka baakadaha oo soo saaraya xirmooyin aamin ah oo xirmay ayaa ...
Markaad raadineyso mashiinada baakadaha, waxa kaliya ee fiican ayaa sameyn doona. Mashiinnada ganacsigaaga ayaa ka badan maalgashi bilow ah. Waxay sameyn kartaa ama jebin kartaa mustaqbalka shirkaddaada. Sidaa darteed waxaad dooneysaa inaad doorato mashiinada baakadaha ee lagu dhisay qalabka ugu tayada sareeya. Haddii aad xiiseyneyso ...
Baakadaha alaabadaadu badanaa waa isdhexgalka ugu horreeya ee iibsaduhu la leeyahay astaantaada. Sideed ku ogaan kartaa inay saamaynta ugu badan ku yeelanayso? Hoos waxaa ku yaal 5 waxyaabood oo baakadahaaga dabiiciga / dabiiciga ah ay tahay inay sameeyaan si ay u noqdaan wax weyn, oo aan fiicnayn oo keliya. 1. Ka ilaali sheygaaga xaalufka iyo wasakheynta. Nu ...
SIDEE LOOGA DOORANAA MAKIINADDA ISTIRAALKA EE JOOGTADA AH
Aynu ku tusno sida loo doorto mashiinnada wax lagu rito ee saxda ah. Tusaale ahaan, waxaad dooneysaa inaad heshid mashiinka wax lagu karsado oo fudud. 1, Marka ugu horeysa, go'aanso alaabada aad rabto inaad xirxirto iibsigaaga, alaabooyinka kaladuwan waxay isticmaali doonaan nidaamka buuxinta kaladuwan, sida auger filler, iskudhaf ...